March 15, 2012 by chowutyee ကူဖီ မလိုင် (Kulfi)
Posted in အိန္ဒိယ ဟင်းလျာချက်ပြုတ်နည်း | 42 Comments	42 Responses
ဘယ်လို ရှင်းပြရမှန်းတောင် သိတော့ဘူး… စားပွဲတင်ဇွန်း(1 tbs) နဲ့ လက်ဘက်ရည်ဇွန်း(1 ts) ကို ခွဲခြား သိချင်ရင် http://www.gourmetsleuth.com/images/measuring_spoons.jpg မှာ တချက်ကြည့်လိုက်ပါနော်… ရေခဲခဲတဲ့အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ ထည့်ပေးရမှာပါ.. လုပ်စားကြည့်ပါနော်..🙂
ဟုတ်ကဲ့ မစန္ဒကူးမေ လုပ်စားကြည့်ပါမ.. လုပ်ရတာ မခက်ဘူး၊ အချိန်ပဲ နည်းနည်းကြာတာရယ်.. ကျေးဇူးနော်..😛
Thanks you so much. I’ll try at home🙂
Plz try it sis! Thanks you too😀
Plz try it.. Thanks😛
ဟုတ်တယ် လုပ်ရတယ်လွယ်ပါတယ် ညီမရေ… လုပ်စားကြည့်နော်..🙂
ဟုတ်တယ် မခင်ယမုံ ဖာလာစေ့က စိမ်းဝါလေး၊ အခွံထဲက အစေ့လေးကို ထောင်းပြီ အနံ့၊ အရသာအတွက် နည်းနည်းလေး ဖြူးရုံပဲ။ လုပ်စားကြည့်ပါနော် မရေ.. thanks😀
အန်တီတင့် လုပ်စားကြည့်ပါနော်… ၀တ်ရည်ကလည်း အထူးကျေးဇူးပါ…🙂
ဆန်မှုန့်က အစိမ်းမှုန့် ထည့်ရမှာပါ..🙂
ဆန်မှုန့်က အစိမ်းမှုန့်ကို သုံးရမှာပါ။ လုပ်စားကြည့်ပါနော်..🙂
thz…. wut yee….. i like it.🙂
No Problem sis! After I try, I will surely post that recipe!😀
Plz try it !😛
ဟုတ်ကဲ့ မမူရာ… လုပ်နည်းလေး သိတာနဲ့ လုပ်အုန်းမှာ..😀
မမက ယပလက်နဲ့ယာတဲ့ မမူယာနော်🙂